विप्लव बन्दको प्रभावले गण्डकी प्रदेश भित्र कहाँ-कहाँ कस्ता घटना भए ? | NepalDut
विप्लव बन्दको प्रभावले गण्डकी प्रदेश भित्र कहाँ-कहाँ कस्ता घटना भए ?
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आव्हान गरेको बन्दले गण्डकी प्रदेश भित्रका विभिन्न जिल्ला प्रभावित बनाएको छ । बम विस्फोट र बम फेला परेका घटनाले आज दिनभरजसो सर्वसाधारण त्रासपुर्ण दिन कटाएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश भित्रका घटनाहरु
कास्की स्थित पोखरा महानगरपालिका-८ न्युरोड स्थित हिमालयन बैङ्क नजिकै रहेको ईन्भेष्ट डेभलपमेन्ट एजुकेशन एकेडेमीको गेटमा पनि बम फेला परेको थियो । उक्त स्थानमा पनि तत्कालै प्रहरी र नेपाली सेना सहितको डिस्पोजल टोलि खटिई डिस्पोज गरिएको छ ।
त्यसैगरि पोखरा महानगरपालिका-१७ पोखरा किन्डर गार्डेन स्कुल गेट अगाडी बाटोमा कागजले बेरेको, कालो टेप र तार समेत देखिएको अवस्थामा शंकास्पद बस्तु फेला परेको थियो । जानकारी प्राप्त हुनासाथ प्रहरी र नेपाली सेनाको डिस्पोजल खटिई चेकजाँच गर्दा कागज मात्र रहेको पुष्टि भएको छ ।
कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका-४ लाचोकमा गाउँपालिकाको कार्यालय नजिकै रहको एम्बुलेन्स राख्ने ग्यारेजको गेटमा राखिएको बम पनि नेपाली सेनाले डिस्पोज गरेको छ । पत्रिकाले बेरेर राखेको र तार बाहिर निस्केको अवस्थामा बम फेला परेको थियो ।
कास्कीको अन्नपुर्ण गाउँपालिका-५ र ६ को सिमानामा रहेको धोबी खोलाको बेली ब्रिज पुलमा २ फिट लामो पाईप जस्तो गोलो बस्तुमा तार जडित टेपले बेरेको शंकास्पद फेला परेको थियो । खवर पाउनासाथ तत्कालै प्रहरी र नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले चेकजाँच गर्दा बारुद जस्तो पदार्थ फेला परेपछि डिस्पोज गरिएको छ ।
कास्कीकै अन्नपुर्ण गाउँपालिका- १ नौडाँडाँमा ३ वटा बस्तुमा तार जडित कालो टेपले बेरेको शंकास्पद बस्तु फेला परेको थियो । उक्त बस्तुलाई नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले चेकजाँच गर्दा बारुद जस्तो पदार्थ फेला परेपछि डिस्पोज गरिएको हो ।
तनहुँको वन्दिपुर गाउँपालिका-१ नाला स्थित पृथ्विराजमार्गमा फेला परेको बम नेपाली सेनाले डिस्पोज गरेको छ । शंकास्पद बस्तु फेला परेको सुचना पाएलगत्तै पुलिस र नेपाली सेनाले चेक चाँच गर्दा डेटोनेटर फेला थियो ।
तनहुँकै व्यास नगरपालिका-१२ मुसेखोला स्थित पृथ्वि राजमार्गमा सेतो प्लाष्टिक भित्र माटो भरेर राखेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
स्याङ्जाको काली गण्डकी गाउँपालिका-७ मिर्मी बजारमा त्रसित बनाउनको लागी ईटालाई बेरेर राखिएको थियो । चारपाटे देखिने सेतो कपडाले बेरेको,माथिबाट रातो कपडाको डोरीले बाधी तार बाहिर निस्केको अवस्थामा शंकास्पद बस्तु फेला परेपछि उक्त वस्तु ईट्टा मात्रै भएको पुष्टि भएको हो ।
बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका-१ स्थित मध्ये पहाडी लोक मार्गमा पनि पनि शंकास्पद बस्तु फेला परेको थियो । सडकको कुनामा त्रसाउनका लागी मात्र प्लाष्टिकमा ईट्टा बेरेर राखेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बागलुङ नगरपालिका-२ श्रीनगरटोलमा आधा फिट लामो बस्तुमा सुतलिले बेरेको कालो रातो तार निस्किएको अवस्थामा शंकास्पद बस्तु फेला परेको थियो । घटनामा तत्कालै प्रहरी र नेपाली सेनाले चेकजाँच गर्दा प्लाष्टिकको बोत्तल काटी उक्त बोत्तल भित्र कपडा मात्रै राखीएको पुष्टि भएको छ ।
कुनै जिल्लामा बम फेला परेपछि नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरिसकेको छ भने कुनै स्थानमा सर्वसाधारणलाई तर्साउनका लागी मात्र शंकास्पद बस्तु राखिएको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता गोविन्द पुरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विहानै देखि सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारिएकोले प्रदेश भित्र छिटफुट घटना बाहेक मानविय क्षति हुने खालको कुनै अप्रिय घटना भएको छैन् । साँझ पछि जनजिवन सामान्य भएको छ ।